Strategic Reading (နည်းပရိယာယ် ကြွယ်ဝစွာဖြင့် ဖတ်ခြင်း) - Myanmar Network
Strategic Reading (နည်းပရိယာယ် ကြွယ်ဝစွာဖြင့် ဖတ်ခြင်း)
Posted by Myanmar Network on October 2, 2012 at 10:26 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဤ Strategic Reading - နည်းပရိယာယ်သုံး၍ စာဖတ်ခြင်းအကြောင်းကို "Surviving an interview" ခေါင်းစဉ်ပါ passage - စာပိုဒ်ကို အသုံးပြု၍ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
You are going for that all-important interview – foraplace inanew school or college or foranew job. You walk into the room and there they are – the interviewers – waiting to see what you are made of.
But you know that the actual words you speak are less important than the way you look, the way you behave? Remember, they won’t just be listening to you; they will be watching you too, receiving all the message you send out, consciously or unconsciously. And then they’ll decide whether you are the right person for the place or the job.
Nervous? Don’t be. Relax. Just follow our seven-point plan.
Don’t cross anything! Keep arms, legs and feet relaxed and uncrossed. People with folded arms looks like they’re trying to protect themselves from something. They seem to be saying ‘I’m not confident.’ If you’re wearingajacket, undo the buttons and open it up. An open jacket says ‘I am an honest person. I have nothing to hide.’
Lean forward. Don’t sit back. It makes you look tired or nervous. Sit forward, project yourself into the space. Show by the way you sit that you are ready and eager, that you want to be part of the scene.
Make direct eye contact! Avoid looking away all the time because it makes you look suspicious. Look directly at the people who are asking you questions or who you are talking to. If you lower your head all the time they won’t be able to see the enthusiasm in your eyes.
Mirror their actions! One of the best ways of gaining people’s trust and confidence is to move in the same way as they do. Listen to the speed at which they’re talking, and watch they way they sit or move around. Do the same, but do it slowly at first. You don’t want them to think you are making fun of them.
Go in confidently! A lot depends on how you enter the room. If you walk in nervously with your head and shoulders down, the interviewers won’t think much of you from the outset. Go on with your head held high,aslight smile on your lips. When you shake hands with the interviewers don’t be too enthusiastic, but make it strong and decisive. Nobody likesaweak handshake.
Use your head! When somebody asks youaquestion, don’t just say the first thing that comes into your head. Think about your answers. Always say to yourself, ‘Why are they asking this question?’ because when you know that, you’ll probably be able to give an appropriate answer!
Think quickly! Studies have shown that people in interviews get most nervous when there isasilence. So be prepared to speak quickly and fluently. But use your head (see above)
Enrol on one of our confidence courses.
ဤစာပိုဒ်၏ general idea ခေါ်ယေဘူယျအကြာင်းမှာ "Charlene Stewart" ၏ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းခံရသောအခါ၌ ဘေးကင်းရန်ကွာစွာ ဖြေဆိုနိုင်စေမည့် အချက်များပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာတပိုဒ်ကိုဖတ်ရာတွင် Pre-reading, while reading နှင့် post/after reading ဟူ၍ အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါသည်။
ဤ Text စာသားများကို မဖက်မီခေါင်းစဉ်ကို ရှေးဦးစွာလေ့လာပါ။
- ခေါင်းစဉ် "Let your body do the talking!"" ဆိုသည်မှာ စာပိုဒ်ပါ အချက် (၇)ချက် အတွက် အဓိကျနေပေလိမ့်မည်။
- Nervous? Don't be relaxed. Just follow our seven point plan. ဟူသည့် sub-title ဘေးခေါင်းစဉ်မှာ hint ခေါ်စာဖတ်ရာတွင် အရေးကြီးမည့် အရိပ်ပြ၊ အကြံကောင်း၊ ဥာဏ်ကောင်း အချက်အလက်များဖြစ်လာပေမည်။
- Seven points ဟု ယခုဖော်ပြထားသဖြင့်၊ အချက် (၇) ချက်ရှိမည်မှာ အထင်ရှားဖြစ်ပြီး ထိုအချက် (၇) ချက်၏ main ideas ခေါ်အဓိက အချက် (၇) ချက်ကို ခြုံငုံသိရှိရန် အရေးကြီးပေသည်။
- Text ကို ဖက်နေစဉ်တွင် pre-reading ၌ ဖော်ပြထားသော tasks လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပါ ယှဉ်တွဲစဉ်းစား၍ စာပိုဒ်ကိုသဘောပေါက် နားလည်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ pre-reading ၌ ချမှတ်ပေးထားသည့် အချက်အလက်များကိုလည်း ရှာဖွေ စဉ်းစားဖော်ထုတ်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
- Passage - စာပိုဒ်တခုလုံးကို ဖတ်ပြီးနောက် paragraph - တခုစီ၏ main ideas ရေးသားဖော်ပြပုံကို ပြဖန်သုံးသပ်ပါ။
- Introduction ခေါ် နိဒါန်း paragraph ၏ Main idea မှာ interview ခေါ် လူတွေ့၊ တွေ့ဆုံခြင်းခံရရာ၌ သင်ပြောကြားဖြေဆိုသော အချက်အလက်များထက်၊ သင်၏ အသွင်အပြင်၊ အပြုအမူသည် ပို၍ အရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
ခန္ဒာကိုယ်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှ ကြက်ခြေခတ်သဏ္ဍန် မထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခြေလက်များကို ကြက်ခြေခက်ယှက်ထားခြင်းဖြင့်၊ သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်စိတ်ချမှု မရှိကြောင်းဖော်ပြနေသကဲ့သိုဖြစ်သည်။
သင်၏ခန္ဒာကိုယ်အရှေ့ကို ကိုင်းညွန့်၍ထိုင်ပါ။ နောက်သို့ဆုတ်၍ မထိုင်ပါနှင့်။ ရှေ့သို့ကိုင်းညွန့်ထားခြင်းဖြင့် သင်သည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း၊ စိတ်အားတက်ကြွကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
သင့်အားလူတွေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းသူနှင့် မျက်စိခြင်းစုံ၍ စကားပြောပါ။ မျက်စိမလွှဲရှောင်ပါနှင့်။ မျက်စိကိုလွှဲရှောင်ခြင်းဖြင့် သင်၏ထကြွလုံ့လရှိမှုကို သင်၏မျက်လုံးများကဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
သင်သည်စစ်ဆေးသူ၏ လှူပ်ရှားမှုများကို လိုက်လံ၍ ရောင်ပြန်ဟတ်နိုင်ပါစေ။ အခြားသူများ၏ယုံကြည်စိတ်ချမှူကို ရရှိစေရန် ထိုသူများ၏ လှုပ်ရှားပုံများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေလှုပ်ရှားတတ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင့်အားခေါ်ယူတွေ့ဆုံသူ၏ အခန်းအတွင်းသို့ ကိုယ်ကိုယ် ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှု အပြည့်ဖြင့် ဝင်တွေ့ပါ။ တုန်လှုပ်ချောက်ခြားစွာဖြင့် ခေါင်းငိုက်စိုက်ချ၍ ဝင်လာသူအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံသူသည် ကနဦးအစကပင် အထင်ကြီးတော့မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်အားမေးမြန်း သောမေးခွန်းများကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပါ။ လွယ်လင့်တကူ တုန့်ပြန်မဖြေဆိုမီ "ဤမေးခွန်းကိုအဘယ်ကြောင့်များမေးပါလိမ့် " ဟူ၍ ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးမှသာလျှင် သင့်လျှော်ရာအဖြေကို ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်သည်လျှင်မြန်စွာတွေးတောတတ်ပါစေ။ ဆဋ္ဌမညွန်ကြားချက်တွင် တွေးပြီးမှဆိုသော်လည်း ကြာရှည်စွာ စဉ်းစားနေချိန်တွင် တွေးပြီးမှ ဖြေပါဆိုသော်လည်း ကြာရှည်စွာစဉ်းစားနေချိန်အတွင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတတ်၏။ ထိုတိတ်ဆိတ်နေမှုသည် ခြောက်ခြားမှူကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သဖြင့် သင်၏တွေးတောယူဆချက်ကို အလျှင်အမြန် ပြောဆိုပါ။
ဤဖော်ပြပါ အချက် (၇)ချက်သည် Interview ခေါ်လူတွေ့၊ တွေ့ဆုံ ဖြေကြားရာတွင် ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုဖြေဆိုမှု သည်အဓိက အရေးပါသောကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေပါ၍ "Let your body do the talking" ဟူ၍ခေါင်းစဉ်တတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ "Nervous" အစချီသောခေါင်းစဉ်မှာလည်း လူတွေ့ ၊တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းခံရသောအခါ တုန်လှုပ်ချောက်ခြားမှုကင်းဝေးစေရန်၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များကို စာရေးသူက ဖေါ်ပြအကြံပြုထားပါသည်။ ထိုကြောင့် "Strategic Reading" တွင် Text တခုကို မဖတ်မှီ၊ Pre Reading အဆင့်၌ Topic နှင့် Sub Topic များကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားပါက While Reading အဆင့်၊ စာပိုဒ်ကိုဖတ်နေစဉ် ခေါင်းစဉ်နှင့် စာပိုဒ်များဆက်စပ်နေမှာကို ကြံစည်တွေးတော တတ်ပါသည်။
ဤ While reading အဆင့်တွင် Pre-Reading စာမဖတ်မှီကပင်၊ Task ပြုလုပ်ဖွယ်ရာလုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်စီမံပြုလုပ်ထားပေးပါသဖြင့်၊ သမရိုးကျစာဖတ်သည့် အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘဲံ၊ စဉ်းစားသုံးသပ်ရသည့်အဆင့်များ ပါဝင်နေသဖြင့် Critical Thinking ခေါ် စဉ်းစားဥာဏ်ကို ပို၍ရင့်သန်စေပါသည်။ စဉ်းစားဥာဏ်ရင့်သန်လာသည်နှင့်အမျှ စာပိုဒ်ပါအကြောင်းအရာအချက်အလက်များကို ပို၍ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက် နားလည်စေပါသည်။ After Reading သို့ Post Reading ခေါ်စာဖတ်ပြီး စာဖတ်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်တွင် Text ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် Paragraph အတိုင်း Key Sentence (သို့) Topic Sentence ပါရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို Topic Sentence များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် Paragraph ၏ ပထမစာကြောင်းတွင်ဖေါ်ပြလေ့ရှိပြီး၊ Main idea ခေါ် ထို Paragraph ၏ အဓိကအကြောင်းအရာကိုလည်း ဖေါ်ပြလေ့ရှိသည်။
ထို Topic Sentence ၏ Main idea ကိုအခြေခံပြီးမှ Supporting idea(s) ခေါ် Main idea ကိုအထောက်အကူပြု ဝါကျများ Cause and effect အကျိုးနှင့် အကြောင်းပြ ဝါကျများ၊ Example Sentence(s) ဥပမာပြဝါကျများ Suggestion(S) အကြံပြုချက်များ၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များကို ဆင့်ပွားဖြန့်ချက်၍ဖော်ပြကြပါသည်။ အချို့သော Text များတွင် စာရေးသူ၏ Suggestion အကြံပြုချက်နှင့် Recommendation ထောက်ခံချက်များ ကိုနိဒါန်းအဖြစ်လည်း ဖေါ်ပြလေ့ရှိပါသည်။ ဤ Reading strategy စာဖတ်နည်း ပရိယာယ်များကို သိရှိခြင်းဖြင့် စာဖတ်သူတို့၏ စာဖတ်စွမ်းရည် မြင့်မားတိုးတက်ကြပါစေ။
Permalink Reply by Zaw Win on October 2, 2012 at 11:38
Permalink Reply by maythuaye on October 2, 2012 at 12:01
Permalink Reply by May Myat Thu on October 2, 2012 at 20:07
Permalink Reply by thant zin tun on October 3, 2012 at 0:53
ွှThanks for your suggestion
Permalink Reply by Hnin Ei Phyo on October 3, 2012 at 11:54
Permalink Reply by aung aung on October 3, 2012 at 13:14
the topics doesn't fit well with the article, but good presentation though
Permalink Reply by JLo Bee on October 4, 2012 at 11:47
Permalink Reply by khinthidasoe on October 4, 2012 at 17:37
Permalink Reply by Wai Myo on October 5, 2012 at 4:56
Permalink Reply by Skycyan Linn on October 7, 2012 at 23:36
Star MemberPermalink Reply by Yamin Aye on October 9, 2012 at 14:41
I Like Post!...
You are Sharing for me. Thank you very much.
Permalink Reply by Ashin Pannavamsa on October 11, 2012 at 12:47
thanks , teacher